Winner declared in Zimbabwe's first post-Mugabe election | Algeria-US
CBS: Winner declared in Zimbabwe's first post-Mugabe election
2018-08-02 (388 Days Old)Total Views: 172 | Last 7 Days: 3
Opposition supporters protested in Harare over alleged vote-rigging, which led to six deaths on Wednesday
16 Related Articles, between 2018-08-01 and 2018-08-03
Deadly riots rock Zimbabwe's capital as vote results delayed. Soldiers and police fired at protesters who burned vehicles Wednesday in Zimbabwe's capital, dashing optimism of a smooth election after decades of Robert Mugabe's rule. >>
Emmerson Mnangagwa declared winner in Zimbabwe's election. Zimbabwe's electoral commission says President Emmerson Mnangagwa has won the first post-Mugabe election. >>
Emmerson Mnangagwa wins historic Zimbabwe presidential election. Zimbabwe’s President Emmerson Mnangagwa won election Friday with just over 50 percent of the ballots as the ruling party maintained control of the government in the first vote since the fall of longtime leader Robert Mugabe. >>
Riots shake Zimbabwean capital as election results are delayed. Rioting erupted Wednesday in Zimbabwe's capital as opposition supporters clashed with police and army troops over delays in announcing results from the presidential election, the country's first since the fall of longtime leader Robert Mugabe. The security forces opened fire with guns, water cannons... >>
Violence erupts in Zimbabwe as presidential election results delayed. Rioting erupted Wednesday in Zimbabwe's capital as opposition supporters clashed with police and army troops over delays in announcing results from the presidential election, the country's first since the fall of longtime leader Robert Mugabe. >>
Zimbabwe president closes in on victory as results roll in. Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa, a former spy chief installed after Robert Mugabe's removal in a November coup, closed in on victory on Thursday in an election marred by the deaths of six people in an army crackdown on opposition protests. >>
Zimbabwe president wins 1st post-Mugabe election. Zimbabwe's electoral commission says President Emmerson Mnangagwa has won Monday's election as the ruling party maintains control of the government. >>
Zimbabwe: from Mugabe's ouster to a bloody election. Zimbabwe's first elections since the removal of long-standing president Robert Mugabe turned violent when troops opened fire on protests against alleged... >>
Zimbabwe's electoral commission says President Emmerson Mnangagwa wins 1st post-Mugabe election. Zimbabwe's electoral commission says President Emmerson Mnangagwa wins 1st post-Mugabe election >>
Zimbabwe's Mnangagwa wins 1st post-Mugabe election. Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa won election Friday with just over 50 per cent of the ballots as the ruling party maintained control of the government. >>
Zimbabwe's Mnangagwa wins first post-Mugabe election. Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa, a former spy chief installed after Robert Mugabe's removal in a coup in November, was elected on Thursday after a poll marred by the deaths of six people in an army crackdown on opposition protests. >>
Zimbabwe's Mnangagwa wins presidential election: commission. Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa, a former spy chief installed after Robert Mugabe's removal in a coup in November, on Friday won a poll marred by the deaths of six people in an army crackdown on opposition protests. >>
Zimbabwe's ruling party wins control of parliament. HARARE, Zimbabwe - Zimbabwe's ruling party has won a majority of seats in parliament, the electoral commission announced on Wednesday, as the country braced for the official results of the first presidential election after longtime leader Robert Mugabe left office in November. >>
Zimbabwe´s Mnangagwa wins first post-Mugabe election. Mr Mnangagwa received 50.8% of the vote. >>
Zimbabwe’s electoral commission says President Emmerson Mnangagwa wins 1st post-Mugabe election. Zimbabwe’s electoral commission says President Emmerson Mnangagwa wins 1st post-Mugabe election. >>
Zimbabwe’s Mnangagwa wins 1st post-Mugabe election. Zimbabwe’s President Emmerson Mnangagwa won election Friday with just over 50 percent of the ballots as the ruling party maintained control of the government in the first vote since the fall of longtime leader Robert Mugabe. >>